သူမ၏သင်တန်းဆရာအဆိုအရကယ်လီ Ripa ရဲ့ Ab လေ့ကျင့်ခန်း - ကျန်းမာရေး
ချက်ချင်းပြင်ဆင်ချက် ဆံပင် အသိပညာ & ပညာရေး ခေတ်ရေစီးကြောင်း သတင်း မင်္ဂလာဆောင်အလှအပ ကျန်းမာရေး Celeb ကြည့်ပါ နည်းပညာ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု
သူမ၏အမှန်တကယ်သင်တန်းသူမအဆိုအရ Kelly Ripa ကဲ့သို့ Abs မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း
ဂျက်ဖ် Kravitz / Getty Images
ကျနော်တို့ကဒီမှာကျော်ကြီးမားတဲ့ကယ်လီ Ripa ပရိတ်သတ်တွေပါပဲ။ နှင့်သူမ၏ဆပ်ပြာကြယ်ပွင့်ကနေနေ့ခင်းဘက် Darling သို့သွားနှစ်ပေါင်း 30 စောင့်ကြည့်ပြီးနောက်, ငါတို့ stan status ကိုအပေါ် verging နေပြောချင်ပါတယ်။ တီဗီနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများတွင် Ripa သည်သူမ၏အိမ်တွင်အားကစားရုံမှသူမ၏ခင်ပွန်း၏ဘေးအခြမ်းခြောက်ခုအထိအရာအားလုံးကိုမျှဝေပေးသည်။ ဘေးဖယ်ရေငတ်ထောင်ချောက်ကျနော်တို့သူမ၏သူမအဘယ်သူမျှမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့တူ bodycon စားဆင်ယင် rocks ဘယ်လို (အလေးအနက်ထား, သင်သူမ၏ခါးမြင်ကြပြီလော) အပါအဝင်သူမ၏ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အကြောင်းပိုမိုသိရန်ခဲ့ရသည်။
Soip Cycle တွင်အပတ်စဉ်ပြေးခြင်းနှင့်လှည့်ဖျားသင်တန်းများအပြင် Ripa သည်သက်တမ်းကြာသောအနုပညာရှင်နည်းပြကိုအမှီပြုသည်။ Anna kaiser နှင့်သူမ၏အကအခုန် cardio အတန်းမှာ Anna Kaiser စတူဒီယို သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပ်ဖျားပုံစံဖြင့်ထိန်းသိမ်းရန်။ လွန်ခဲ့သော ၁၁ နှစ်က Ripa သည်လေ့ကျင့်ခန်းအသစ်တစ်ခုလိုအပ်နေချိန်တွင်သူတို့နှစ် ဦး သည်ပထမ ဦး ဆုံးဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့တွေတွေ့ခဲ့တယ်၊ ချွေးထွက်ခဲ့တယ်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ Kaiser ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးနည်းလမ်းဒီတော့အထူးစေသည်? ဒါဟာပေါင်းစပ်ပါတယ် ကခုန် နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ရေး, Kaiser ကရှင်းပြသည်, ဒါပေမယ့်ငါနှင့်အတူစတင်ရန်နှစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းစပ်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ စတူဒီယိုတွင်အလုပ်လုပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအခါစတူဒီယိုအပြင်ဘက်ရှိအရာအားလုံးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဒါဆိုမင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းကိုသင်ပျော်မွေ့နိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့အာကာသတစ်ခွင်ကိုမင်းသားအနေနဲ့သင်ဖြတ်သန်းပုံကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါသင်ဟာအတန်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာရှိတဲ့သင့်ကြွက်သားတွေအားလုံးကိုအမှန်တကယ်လက်လှမ်းမီမှာပါ။ ပရိုဂရမ်အများစုသည်ပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာအဓိကထားသည်။ ငါအဖွဲ့လိုက်လေ့ကျင့်ခန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖန်တီးချင်တယ်၊ မင်းကအရာအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းမှာရနိုင်တဲ့အပြင်မင်းကိုစိန်ခေါ်မှု၊
အန်နာကေဆာ (@theannakaiser) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
သို့သော် Ripa ရဲ့အသက်အရွယ် - ကိုငြင်းပယ် physique ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်ထက်ကတိကဝတ်အပေါ်ပိုမိုမှီခို မင်္ဂလာပါ ။ သူမသည်ဒါတသမတ်တည်းပဲ! Kaiser raves ။ အခြားအမှုအရာတစ်သန်းသန်းဖြစ်ပျက်သည့်နေ့များ၌ပင်သူမသည်သူမ၏အချိန်ဇယားမှအစည်းအဝေးကဲ့သို့၎င်းကို ဦး စားပေးသည်။ ဒါကဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆိုသင်လျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ၊ လက်တွေ့ကျကျတစ်ခုခုမှကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ပြသပါကရိုးရှင်းပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ကြီးလာသောအခါချိန်ခွင်လျှာသည်မည်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ လေ့လာရေး ကြွက်သားထုသည်အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်ကျဆင်းလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သို့သော်အသက် ၅၀ တွင် Ripa သည်ထိုစည်းမျဉ်းကိုခြွင်းချက်ထားရှိသည်။ ချစ်လှစွာသောဖခင်အချိန်၏ဆိုးကျိုးများကိုတိုက်ဖျက်ရန်သော့ချက်လား။ အစွမ်းသတ္တိ, cardio နှင့်အာဟာရ၏မှန်ကန်သောပေါင်းစပ်ရှာဖွေတာ။ ငါ Kelly ကိုအမျိုးမျိုးသောကျားကန်ခြင်းနှင့်ခွန်အားပေါင်းစပ်ခြင်းများနှင့်အမြဲတစေစိန်ခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၊ လေးလံသောအလေးများ၊ ပိုမိုပေါ့ပါးသောအလေးများသို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်များပြောင်းလဲမှုရှိမရှိ Kaiser ကရှင်းပြသည်။ သငျသညျလညျးအလုံအလောက်စားနေသေချာအောင်လုပ်ပါ ပရိုတိန်း သင့်ကြွက်သားများကိုမှန်ကန်သောအာဟာရများကျွေးမွေးခြင်း။ ကြွက်သားများများများလေလေဇီဝဖြစ်ပျက်မှုမြန်လေလေဖြစ်သည်။
Ripa-level abs သို့သွားရန်လမ်းသုံးခုရှိသည် အဓိကရွေ့လျား ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဟောပြောပွဲအိမ်ရှင်က Kaiser ၏လေ့ကျင့်ရေးစာအုပ်မှသူမကိုသွားကြိုလေ့ကျင့်ရန်ဖွင့်သည်။
သက်ဆိုင်သော: 12 သင်၏ Room ည့်ခန်းတွင်သင်လုပ်နိုင်သည့်အခမဲ့အလေးချိန်လေ့ကျင့်ခန်း
လေ့ကျင့်ခန်းသုံးခုလုံးကိုခေတ္တနားပြီးလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။ Psst, Ripa ၏အကြိုက်ဆုံး pump-up jams နှင့်ဤစုံတွဲသည်စုံလင်သည်။
Sinnerman (Felix da Housecat ၏ကောင်းကင်ဘုံ Remix) နီနာဆီမှသည်
Radar (Hot Pink Delorean Remix) Britney Spears ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
Unapologetic B ကို * tch မက်ဒေါနား
1. လိမ် Jackknife
အဆင့် ၁: သင်၏ခြေထောက်ကိုမျှမျှတတထားပြီးပျဉ်ပြားတစ်ခုဖြင့်အစပြုပါ တည်ငြိမ်မှုကိုဘောလုံး ။
အဆင့် ၂: သင်၏ခြေဖ ၀ ါးအတွင်းသို့ဖိပြီးသင်၏လက်ကောက်ဝတ်ကိုပခုံးပေါ်တွင်တင်ထားစဉ်သင်၏တင်ပါးကိုလေထဲသို့မြှောက်လိုက်သည်။ သင်၏ဒူးကိုအနည်းငယ်တင်ပြီးဘယ်ဘက်သို့တင်ပါးကိုလှည့်ပါ။ သင်၏ဘယ်ဘက် tricep ကိုဒူးထောက်ပါ။
အဆင့် ၃: စတင်သည့်အနေအထားသို့ပြန်သွားပါ။ ထပ်မံ၍ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကို ၁၀ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။
2. ရပ်နေသည် Oblique ရောက်ရှိ
အဆင့် ၁: တစ်စုံဖမ်းပြီး လေးလံသော dumbbells (Kaiser မှ ၈ မှ ၁၅ ပေါင်အကြံပြုပြီး) သင်၏တင်ပါးနှင့်အနည်းငယ်ဒူးဆစ်ဒူးနှင့်အနည်းငယ်ဒူးထောက်ပြီးရပ်ပါ။
အဆင့် ၂: သင်၏လက်များကိုလက်တစ်ချောင်းတွင်တင်ပါးတစ်ချောင်းဖြင့်သင်၏ဘယ်ဘက်ကိုမှီ။ ဘယ်ဘက်အလေးချိန်ကိုဘယ်ဘက်ဒူးသို့ ဦး တည်။ ညာဘက်အလေးချိန်ကိုသင်၏ပခုံးပေါ်သို့မြှောက်ထားပါ။
3. ခြောက် Pack Sizzle
အဆင့် ၁: တစ်ပေါင် ၈ ပေါင်ကိုင်ထားပြီးမင်းရဲ့နောက်ကျောကိုအိပ်ပါ ကံကြမ္မာ သင်၏ခြေထောက်များကိုသင့်ရှေ့မှောက်၌မြေပြင်ပေါ်တွင်ဖြောင့်စွာတိုးချဲ့ထားသည်။
အဆင့် ၂: သင့်ရင်ဘတ်တွင်အလေးချိန်ကိုထိန်းထားပါ၊ သင်၏မေးစေ့ကိုဆွဲကာခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုမြေပြင်ပေါ်သို့တင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းလှိမ့်ထားပါ။ မြှောက်ထားသောခြေထောက်ဆီသို့လှည့်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်ရှိတင်ပါးကိုအလေးချိန်ကိုတင်ပါ။
အဆင့် ၃: မြေပြင်ပေါ်ပြန်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းပြီးတစ်ဖက်တွင် ၁၀ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းသို့ပြောင်းပြီးထပ်လုပ်ပါ။
ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်သူမည်သူမဆိုသင့်အားပြောပြသကဲ့သို့သင်တစ်ကိုယ်လုံးချွေးထွက်ပြီးနောက်သင်ဘာလုပ်ရမည်ဆိုသည်မှာလေ့ကျင့်ခန်းကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့ပင်အရေးကြီးသည်။ ကျနော်တို့နဲ့ check လုပ်ထားပါတယ် ဒေါက်တာ Daryl Gioffre , အနုပညာရှင်အာဟာရနှင့်စာရေးဆရာ သင်၏အက်ဆစ်ကိုပိတ်ပါ နှင့် သင်၏သကြားကိုချွတ်ပါ Ripa သည်သူမလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးသည့်မုန့်ညက်အပါအ ၀ င်မည်ကဲ့သို့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်ကိုအတိအကျသိရှိရန်။
လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်သင်ခန်ဓာကိုယ်ထဲသို့ထည့်ထားသောလောင်စာသည်နေ့၏အရေးအပါဆုံးအစာဖြစ်သည်ဟုသူကပြောပြသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက် Kelly သည် microgreens၊ လတ်ဆတ်သောသံပုရာဖျော်ရည်နှင့်အပိုအပျိုကညာသံလွင်ဆီတို့ပါဝင်သည့်သုပ်ကြီးတစ်လုံးရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်မဂ္ဂနီစီယမ်ကဲ့သို့သောအယ်လကာလီဓာတ်သတ္တုများပါ ၀ င်သည်။ သင့်ကြွက်သားများတွင်နာကျင်မှုသို့ ဦး တည်စေသော၊ ရောင်ရမ်းခြင်းများကိုနှေးကွေးစေပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သောပြန်လည်နာလန်ထူလာစေရန်ပြုလုပ်သည်။ ကယ်လီသည်အာဟာရပြည့်ဝစေသောအာဟာရဖြည့်တင်းမှုအတွက်ပရိုတိန်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်စွမ်းအင်နှင့်ပြည့်ဝသည့်အာဟာရပြည့်ဝသောအာဟာရဓာတ်များဖြစ်သောထောပတ်သီး၊ ထင်းရှူးအခွံမာ၊ ရုတ်တရက်အသုပ်တစ်ခုအတွက်စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးရှိလား။ အထူးသဖြင့်စိတ်အားထက်သန်စွာလေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်သူသည် Dr. Gioffre ၏ကိုယ်ပိုင်ကဲ့သို့သောဓာတ်သတ္တုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသောက်ခြင်းတွင်ရောနှောပါလိမ့်မည် အက်ဆစ် - ကန်သတ္တုဓာတ် ဖြည့်စွက်။
သက်ဆိုင်သော: ဤတွင်သူမ၏သင်တန်းဆရာအဆိုအရကယ်လီ Ripa ရဲ့ခြေထောက်များကိုရဖို့ကိုဘယ်လိုပါပဲ
Kelly Ripa ကိုဝယ်ပါ''s ပုံစံ
Vero Moda Lefile Puff အစင်းဒီဇိုင်းလက်တိုအင်္ကျီ
$ 35 အခုဝယ်ပါ
ဒေါ်လာ ၈၀ အခုဝယ်ပါ
Stine Goya Mavelin ခရမ်းရောင်ပန်းပွင့်ဒီဇိုင်းဂါ ၀ န်
$ 350 ရှိ၏ ယခုဒေါ်လာ 210 အခုဝယ်ပါ
Farm Burgundy အစင်းဒီဇိုင်း
$ 215 အခုဝယ်ပါ
Categories ထုတ်ကုန်များ ခေတ်ရေစီးကြောင်း အောင်မြင်သူ